UJos B. (Nicky Verstappen) I-PsyOp ngoku isetyenziselwe ukufuna iingxelo zabaxhasi kummeli? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	5 Juni 2019	• 6 Comments
Namhlanje kukho enye iseshoni entsha malunga neJos Brech kwimeko yeNicky Verstappen (jonga Telegraph). Jos Brech, obizwa ngokuba nguJose B. kwiimidiya kwaye akasaboniswa ngezithombe kodwa ngeemidwebo. Icala liqala ngxelo yokuba umququzeleli we-forensic kulesi sizathu wasweleka engozini enkulu. Ngokukhawuleza uyazibuza ukuba le ndoda yayingxweliswa yesazela sayo xa ifumanisa ukuba wayesebenza kwi-PsyOp (ingqondo yengqondo), wayefuna ukuthetha kwaye ngoko kufuneka ahlambuluke? Asisoze sakwazi ukubonisa ukuba. Tidy ucocekile.
Into ongayibonisa kukuba yonke ingqalelo kwimeko itywelwa kwindlela yokuxoxwa ngayo kwiingxoxo malunga neDNA efunyenweyo. Ngokukhawuleza ngeendlela zeBaesian zokubala ukuba kunokwenzeka ukuba i-DNA kaJos Brech, efunyenwe kwimeko yakhe yokulahleka, yayisetyenziswe "kwimeko yokubulala" eyayingekho yicala lokubulala, ngenxa yokuba kungabonakali ukubulala. Awuvunyelwe ngumthetho ukusebenzisa iDNA kwimeko ye-A kwimeko yeB B. Inyaniso yokuba uGerald Roethof akayi kuphinda aphendule ngoku oku kubonisa ukuba sijongene necala le-PsyOp apha. Oku kunokususa ngokukhawuleza ukukhutshwa kukaJos B..
Ingxoxo iphinda iphinda iphinde iphendulwe kwakhona ngokubhekiselele ekuhlaselweni ngokwesini okanye kungabi:
Ummeli uGerald Roethof ukhankanya ingxelo ngugqirha we-forensic uRob Bilo kwaye uthi ukulimala ku-Nicky's anus akuthethi ukuba le nkwenkwe iye yaxhatshazwa ngokwesondo: "Kwakunokuba kubangelwa izigxoba ezinzima okanye ukutshabalalisa."
Ngokuqinisekileyo, uphando lwengqondo lubonisa ukuba uYobhi B. uhamba phambili, kwaye ngokuqhelekileyo udlala inxalenye eyongezelelweyo kwingqondo yabantu abahamba neengcamango yokuba uJos B. kufuneka abe ngumenzi wobubi, ukuze kungabikho mntu obuzayo ukuba sisenokusingatha ukusebenza kwengqondo (PsyOp) ukuzisa umthetho omtsha.
Umshushisi woMbutho ngoku uphendula isigqibo sokuba uRoethof waphetha ukuba iingcali ze-PBC zibheke uJos B. "indoda eqhelekileyo". "Baphinde baqaphele ingxaki, okuyi-pedophilia." #Nicky
Kucacile ukuba kwakungabikho ubungqina bokubulala okanye ukuxhaphazwa ngokwesini, ngoko i-DNA ye (PsyOp actor?) Jos B., efunyenwe kuyo (yenzayo?) Aphumelekanga, ngoko akufuneki ukuba isetyenziswe kuyo (engekhoyo) Icala lokubulala uNicky Verstappen. Nangona kunjalo, ngokudlala kwakhona kwiimvakalelo zabantu ababukeleyo, ingqalelo iyaphambukiswa kule nyathelo engalunganga ngokusemthethweni. Enyanisweni, inkundla ithatha phambili kwimithetho emitsha (ngokuvuma ukusetyenziswa kwe-DNA) kumthetho omtsha. Inyaniso elula yokuba uGerald Roethof akenzi lutho ngalolu hlobo kumenza abe ngummeli ongakholwayo (PsyOp).
Kodwa njengezinto ezininzi, iimeko ze-PsyOp zisetyenziselwa injongo ezininzi. Kule meko, uJos Brech naye uya kufaka ingxelo kummeli wakhe. Yiyo yonke inqanaba lonke kwisigaba se-PsyOp, kuba ngokuqinisekileyo ngokulungelelanisa imithetho eninzi kangako, ngoko ke kuyimfuneko ekusebenzeni apho ufuna ukutshintsha umthetho.
Kwimeko yeT Thijs H. Sasiyibona ukuba i-secret-professional secrecy of GGZ iziko zafuneka zibuyiselwe ixesha elithile, kuba ngaphandle koko imifanekiso yekhamera kunye nezitatimenti zabasebenzi azizange zisetyenziswe. Kwimeko ye-Jos B. bafuna ingxelo evela kuJose B. kummeli wakhe (PsyOp) uGerald Roethof. Kwaye ke amalungelo amaninzi nabemi abanzi ahlulwa isinyathelo ngesinyathelo (bona apha). Nangona kunjalo, kuba kwenzeka kwiimeko ezinkulu zokubulala, uhanahaniso kumaphephandaba, abantu bayamkela ngokuzithandela. Akukho mntu ubona ukuba utshintsho olusungulwe kumthetho lunokuchaphazela bonke abemi, ngoko ke akukho mntu ufumana indlela. Amantombazana kunye nabathobekileyo kwiigqoke baqeqeshwa ukuba bavale imilomo yabo, kuba bafungile kwisithsaba kwaye ukuba isithsaba sichaza umthetho omtsha nge-PsyOp, baya kusebenzisana okanye bathule.
tags: B., Brech, umququzeleli, kakhulu, eziziimbalasane, yonyango, Gerald, Hof, jos, Lungisa, nicky, ngengozi, wafa, OvJ, inkundla, ityala, ityala, Roethof, verstappen
Heray wabhala wathi:
5 Juni 2019 kwi-15: 07
Xa uJohn B wayebanjwe nje, uGerald Roethof wambi wathi i-DNA yafunyanwa ngokungekho mthethweni, kodwa ke wahlala ethule. Mhlawumbi uphelelwe, kuba kungenjalo igqwetha lingazigxininisa kule nto.
Kwakunokwenzeka ukuba wayetyala ukuba enze njengoko wayeya kuyenza ukuba yayiyinto yinyani. Oku kwenziwa ukwenzela ukuba loo nto ibonakale ingokoqobo kunokwenzeka.
Ngenxa yokuba le meko ayilungile, ndiqinisekile ukuba oko. Thatha into yokuba inokwenzeka ngokwenene abantu abaphangi abaninzi abachazwayo, ngelixa incwadi ethi 'Ukufa okumangalisayo kukaNicky Verstappen' kubonisa ukuba inkokheli yekampu uJosos Barten wayazi ukuba umzimba kaNicky uya kufunyanwa. Kwaye kukho nezinye izibonakaliso ezininzi kule nto ukuba ubuncinci wayebandakanyeka ngoncedo kulo mzekelo.
Ndicinga ukuba injongo yayikufumana u-Jos B enetyala, ukuze uxolo lwaseHeibloem lubuyele. Kodwa ekuhloliseni ngakumbi kuya kuba nzima kakhulu. Kungenxa yokuba ibali elinengqiqo linokuthi lenziwe njani noJoseph B njengowona kuphela umenzi wobubi? Kubandakanya zonke iinkcukacha ezaziwayo, njengokuba wayeza kubahamba ngebhayisikili emva kokufunyanwa kukaNicky.
Ndiyakrokra ukuba akazange ajikeleze nonke apha. Oku kwaqulunqwa ukwenzela ukuba kufuneka anikeze iDNA yakhe ngonyaka odlulileyo. Ukuba wayengahambi ngebhayisekile apho, wayengayi kuza kumfanekiso. Amapolisa asekuhlaleni ase-Iraq kunye nokusolakala ukuba ambethe akayi kuphinda akwazi ukuphazamisa le mabango.
Into ebalulekileyo kunokuba ngaba uJos uya kukhanyela uB kwaye uthi wayengazi indlela i-DNA yakhe ngayo kwiingubo. Emva koko akayi kugwetywa, kuba akukho ubungqina obaneleyo. Kodwa sibona ukuba uyolulela ityala. Bokuba basebenzela ibali eligqibeleleyo emva kweembonakaliso kwaye oku kungagqibekanga - kwaye ndiyazi ukuba iya kuzaliseka. Yaye, ewe, andiyikukhuphela ngaphandle ukuba umququzeleli we-forensic ngoku abulawe. Ubuntu ngelishwa lugula kakhulu.
5 Juni 2019 kwi-15: 39
Umzuzwana ngaphandle kwebali lakho lonke, ndingathanda ukubona apho uRoethof wakhe wathi khona. Andikwazi ukukhumbula okanye ukufumana udliwano-ndlebe apho ndivile khona. Inyaniso elula yokuba engagxininisi kule nto ibonakala imenza ummeli we-psyop.
5 Juni 2019 kwi-17: 53
Ndiyakhumbula kwintetho emfutshane kwisitalato emva nje kokuba uJos abanjwe. Andikwazi ukuba bekuphi na kwaye akuyi kuba sekhompyutheni. Kodwa ndiyakhumbula okokuba ndade ndizibuza ukuba ingaba i-Jos ye-DNA ayifumananga ngokungekho mthethweni. Xa igqwetha lakhe lithe njalo, ndandifuna ukwazi ukuba kuya kuhamba njani nale ngxabano. Sazi kakuhle ukuba ngoku, akazange aphinde akuve kwakhona.
5 Juni 2019 kwi-18: 33
Ingxenye yabameli bayasebenza ngokuthe ngqo / ngokungachanekanga kurhulumente. Esinye isiqingatha asenzi nto kwaye uyamoyika uMlawuli, ogcina iliso kumagqwetha egameni likarhulumente, kwaye ukhangele kwiqela lokuqala. Umoyiko wokutshatyalaliswa ngamagqwetha eqela lokuqala. Yingakho bengenzi okusemandleni abo.
Amagqwetha eqela lokuqala adibene nabo abafudumele kunye nabasondelene nabagwebi kunye neBar Association. Ithuba eliphambili lokuphumelela xa ufumana igqwetha elinjalo. Akufanele ube neengxabano zomthetho malunga nesimo semeko yabafana kwi-script. Emva koko abayi kuthatha ityala okanye ukuxhatshazwa kwimeko yakho.
5 Juni 2019 kwi-23: 01
I-Newspaper iThaw iphinde iphepishe le nqaku elithi 'I-DNA match isahluko esinye sefayile yezobugebengu' ye28 Agasti yokugqibela. Kulo, i-Ton Broeders, unjingalwazi wezobugebengu kwiYunivesithi yaseLeiden, uthi: "Kuyinto ephawulekayo ukuba i-DNA yommangali ifunyenwe kuba yayingekho. Oku kufuneka kube ngamacatshulwa amabini ahlukeneyo: abangabamangalisa kunye nabantu abalahlekileyo. "Ngokutsho kweNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente iyahamba ngokwemiqathango, kodwa igqwetha likaB B. lingagxeka ukungabikho kobungqina.
Ngoko kuyamangalisa ukuba uRoethof akayisebenzisi oku kukhuselo. Ngendlela, eli nqaku libonakala linyamalale kwi-Trouw web archive, kodwa ndiyakwazi ukuyifumana http://www.topics.nl.
6 Juni 2019 kwi-22: 53
UJos ke ubambe isitatimende esibhaliweyo 'njengempahla', njengoko uPauw evelile izolo. Akafuni ukutyhila i-statement yakhe okwamanje, kuba yonke into isetyenziselwa ukumelana naye, uthi. Kutheni ecinga ukuba eli nqaku liza kuba yimpahla kamva kamva kungekudala.
Ukuwa ke ndandincokola nomntu kumabonwakude ezentlalo ezithi uJos wayefakela kwiingubo zangasese zokubhukuda zabantwana kwaye uNicky wayesekho. Yiyo indlela uJos kaJ DNA ephelela ngayo kwiintombi zikaNicky. Loo mntu naye wathi undizwile oko kumaphephandaba. Mhlawumbi iphutha, kuba andinakufumana nto malunga nale nto. Ngomhla olandelayo lo mntu ususe impendulo yakhe. UJos mhlawumbi uza kuvela ngxelo enjalo kamva.
« U-Anja Schaap ulahlekile sele ebonakalise i-PsyOp? Bona apha kutheni (ividiyo)
Ukufuna ngokukhawuleza lo msebenzi wasePBS osongela ubomi ovela kwiDen Kolder »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.451.453
Ikhamera 2 op Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"
Willem S op Ubungqina bokubungqina: iiflegi zonyani ziphakanyiswa ukupheliswa kwemali